Nin baan iska dhigay si aan shaqo u helo, eedeyn kufsi baase i fashilisay! | Entertainment and News Site
Home » bulshada » qiso » Nin baan iska dhigay si aan shaqo u helo, eedeyn kufsi baase i fashilisay!
daajis.com:- Pili Xuseen waxay doonaysay in ay lacag ka samayso nooca macdanta ee Tanzanite ee dhifka iyo naadirka ah. Waxaa la sheegayaa in helitaankeeda ay kun jeer ka dhib badan tahay macdanta kale.
” Aabahay waxa uu iila dhaqmi jiray sidii anigoo ah wiil, waxaana la i raacin jiray xoolaha- ma jeclaysan noloshaas” ayey tiri Pili.
“Iskuulka ma aadi jirin, sidaas darteed camal aan ahayn inaan shaqeysto ma garanyn”, ayay tiri Pili.
“Haweenka looma oggolo inay goobaha macdanta ka shaqeeyaan. Marka si geesinimo leh ayaan u galay anigoo iska dhigayo inaan ahay nin. Saraawiil dhaadheer ayaan xiran jiray”, ayay tiri.
” Waxaa la iigu yeeri jiray Adeer Xuseen. Qofna lama wadaagin in magacayga dhabta ah uu yahay Pili. Xitaa manta dadka wali waxay iigu yeeraan Adeer Xuseen.”
” Mararka qaar waxaan gali jiray dhul hoostiisa ilaa iyo 600 oo mitir anigoo raadinayo macdan. Waxaan qodistan u sameyn jiray si ka firfircoon ragga qaar”
” Muddo sanad ah ka dib si weyn ayay macdan qodista uga macaashtay ka dib markii ay heshay laba dhagax oo waaweyn oo ah macdanta nooca loo yaqaanno tanzanites. Lacagtii ay ka heshay waxay uga dhistay guri aabaheed, hooyadeed iyo gabar ay mataano ahaayeen.
“Boolisku markii uu yimid ayaa raggii gabadha kufsaday waxay isku raaceen inaan ahay ninka gabadha kufsaday’. Dabadeedna waxaa la ii sii qaaday xarunta booliska”, ayay tiri Pili.
” Dhab ahaantii kama aysan rumeysanin booliska inaan ahay qof dumar ah. Ma ahan arrin fudud inay aqbalaan ilaa iyo sanaddii 2001 markaasi oo aan guurssaday oon yagleelay qoys.”
“Qaar dumarka ah waxay dhaqaan dhagxaanta, qaar waa dullaaliin, kuwana waa cunto kariyayaal”
Waxay intaas ku dartay “Laakiin dumarka ma aadaan godadka macdanta, Ma fududa in dumarka ay sameeyaan wixii aniga aan sameeyay.”
“Waan ku fraxsanahay wixii aan sameeyay, taajir ayaan ku noqday, balse way igu adkeyd aniga,” ayey tiri.
“Waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo in gabadheyda ay waxbarato, ay cilmi yeelato, ayna nolosheeda u maareyso si ka duwan oo aad uga fog wixii aniga aan u soo joogay.
kuwaana Akhriso Caadi Ma Ahan: bulshada, qiso